Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zvinobatwa neMafashamu neDutumupengo reHurricane Harvey
Dr Prisca Ngondo
Mutungamiri wenyika yeAmerica, vaDonald Trump, vanotarisirwa kuenda ku Texas nemusi weChipiri kunozvionera matambudziko akakonzerwa ne mhepo nemvura iyo yave kuzivikanwa nezita rekuti Hurricane Harvey.
Izvi zvakaitika kunzvimbo yeTaxas mumaguta akaita seHuston nemamwe. Zvivakwa zvizhinji, kusanganisa dzimba, zvikoro, migwagwa nezvimwe zvakaparadzwa nemafashamu nedutumupengo iri. Vakuru veguta iri vanoti vanhu vanoita zviuru zvishanu nemazana mashanu vakatsvagirwa pokugara mushure mokutiza nzvimbo dzavaigara. Asi vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi vakasangana nematambudziko makukutu.
Dr Prisca Ngondo, avo vanodzidisa paTexas State University iri muAustin, vanoti mvura nenhepo zvinenge zvavekuderera zvishoma uye havasati vanzwa kana paine chizvarwa chekuZimbabwe chakakuvadzwa kana kuurawa nemafoshoma emvura aya.
“Kwanga kuchinaya kubva nemusi weChishanu uye nhasi kunotarisirwa kunaya zvekare. Kuno kwatiri kuAustin tiri maawa maviri kubva kuHouston saka mvura nemhepo pazvakazosvika kuno uku kwakange kuine mvura nemhepo mazuva ese kubva musi weChishanu. Nhasi ndiko kwambotomirawo kunaya zvishoma asi inotarisirwa kunaya zvekarae nhasi uno.”
Dr Ngondo vakapamidzirazve vachiti,”Zvikoro zvese zvakavharwa. Taifanirwa kutanga basa nhasi asi vakatovhara chikoro chese nokuti kwatinogara kuno uku kunoita mafoshoma emvura. Kuchiri kunaya zvako asi mhepo yadzikirira.”
Dr Ngondo vanoti change chichinyatsonetsa kwavanogara migwagwa yange ichiyerera mvura zvokuti vanhu vaitosheyedza mapurisa kuti vazobatsira kuvabudisa mumvura.
“MuAustin mune zvizvarwa zvekuZimbabwe uye tineboka redu asi vazhinji vavo vange varimudzimba dzavo uye havana kubuda panze.”
Hurumende yeTaxas yasheyedzera kuti dzimwe nzvimbo dziripasi penjodzi zvekuti dzinofanira kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Pamusoro pezvo, hurumende yatoita zvokumanikidza vamwe vanhu kuti vabve mumatunhu avanotyira kuti angangonyombewa nemafashanu emvura aya.
Hurukuro naDr Prisca Ngondo